VaMadiro veZanu PF Vanowanikwa Vasina Mhosva neDare
Chikumi 17, 2013
MUTARE — Vakambomiswa basa sachigaro we Zanu PF muManicaland, VaMike Madiro, pamwe nemutevedzeri wavo akambomiswawo basa nebato, Amai Dorothy Mabika, vawanikwa nedare redzimhosva vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuba mombe dzaifanirwa kushandiswa semuriwo pamabiko ekupemberera zuva rekuberekwa kwemutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe.
Vachirasa mhosva iyi, mutongi wedare ramajesitireti kwaMutare, Amai Lucy Anne Mungwari, vanoti vachuchisi vehurumende havana kukwanisa kubudisa pachena kuparwa kwakaitwa mhosva nevaviri ava. Amai Mungwari vanoti Zanu PF inofanirwa kugadzirisa nyaya ichitevedza mitemo inoshandiswa pavanhu vanenge vakanganisa mubato iri.
Amai Mungwari vanoti havaoni kuparwa kwemhosva yekuba sezvo pamombe gumi dzainge dzatengerwa mabiko ebhavhadheyi raVaMugabe, nhatu dzakaurayiwa pachiitiko chebato iri.
Mutongi wedare anotiwo mombe nomwe dzakasara dzange dzichiri kupurazi ranyakudzitengesa, VaJohn Chirimambowa kuMiddle Sabi.
Vanoti chaita kuti nyaya iyi iraswe zvakare ndechekuti vaviri ava havana kunge vambobvira vaona mombe dzacho zvekuti vangakwanisa kudziziva.
VaMadiro vanoti vatambira mutongo uyu nemufaro vachiti kuita uku kwapa kuti vazhinji vave nechivimbo nematare emuZimbabwe.
VaMadiro vanotiwo vanoregerera uye vanoshuvira rombo rakanaka kune avo vaivapomera mhosva iyi.
Amai Mabika, avo vange vakatarisana nemhosva imwe chete naVaMadiro, vanoti vanotenda mwari nevamwe vose vakamira navo panguva yekutongwa kwavo.
Gweta revaviri ava, VaTinofara Hove, vanotiwo vafara nezvaitika vachiti mhosva yanga ichipomerwa vaviri ava haineyi nekubiwa kwemombe.
VaMadiro vanoti zvichitevera kupera kwemhosva yavange vakatarisana nayo, vava kunangana nekushandira bato ravo musarudzo dzakatarisana nenyika.
Mune imwewo nyaya yange yakatarisana naAmai Mabika yekuba mhuru dzemukaka nhanhatu, pamwe neyekukanganisa mafambisirwo emhosva dziri mumatare iyo yange iri pamberi pemumwe mutongi wemhosva maMutare, Amai Sekesai Chiwundura, varasa chikumbiro chegweta ravo chekuti mhosva iyi isasvitswe mberi sezvo pasina humbowo huzere hunobata munhu nemhosva.
Vachipa mutongo wavo, Amai Chiwundura vanoti Amai Mabika vanofanirwa kumiswa pamberi pedare kuti vape huchapupu hwavo maererano nezvavanoziva pamafiro emhuru dzakange dzapiwa Zanu PF nemurimi, Va Dawid Jourbert.
Vatiwo vachuchisi vehurumende vakabudisa pachena kuti mhosva ingangodero yakaparwa sezvo pasina kujeka pamafiro anonzi akaitika mhuru dzavainge vapihwa, uye nemafambisirwo ekushandurwa kwemaminitsi emisangano yakaitwa nebato iri.